बिहे हुँदै गरेको घरमा आक्रमण : चारजना घाइते, नगद र गहना लुटपाट ! | सुदुरपश्चिम खबर
विराटनगर : गुण्डगर्दीमा संलग्न समूहले मोरङको केराबारी गाउँपालिका–७ नर्कटेस्थित एउटा बिहे घरमा शनिबार बिहान आक्रमण गरेको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेर आएको समूहको आक्रमणबाट चार जना घाइते भएका छन्। दुई जनाको अवस्था गम्भीर छ। आक्रमणकारी बिहे घरबाट पैसा र सुनचाँदीका गरगहना लुटेर फरार बनेको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यहाँ भेला भएकाहरुले विवादलाई मत्थर बनाउँदै १०–१५ जनाको समूहमा रहेका युवाहरुलाई सम्झाइबुझाइ गरेर घरतिर पठाएका थिए। वडा अध्यक्ष नारायणप्रसाद चेम्जोङ लिम्बूका अनुसार राति ११ बजेतिर फेरि फर्किएर आएका ती युवाहरुले बिहे घरमा होहल्ला गर्न थाले। घटनाका बारेमा थाहा पाएर इलाका प्रहरी कार्यालय केराबारीबाट प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुग्नसाथ उनीहरु त्यहाँबाट फरार बनेको लिम्बूले बताए।
आक्रमणअघि उनीहरुले खुकुरीले काटेर घरका झ्याल तथा ढोका र फर्निचरका सामानहरुमा पनि क्षति पु¥याइदिएका छन्। आक्रमण गरेर बिहे घरलाई रणमैदानमा परिणत गरिदिएपछि त्यहाँ रहेकाहरुबीच भागदौड मच्चिएको थियो। घरमा बसेकाहरु ज्यान बचाउनलाई चिच्याउँदै र आत्तिदै अँध्यारोमा भागेका थिए।
गोसाईंकुण्ड (स्वर्गको एक टुक्रा)मा हिउँका ढिक्कासँगै खेल्दाको त्यो क्षण...!!